Toerana misy an'i Kolombia
Fizahan-tany Amerika Atsimo
Ho an'ireo mpizahatany Rosiana, mbola ao anatin'ny lisitr'ireo firenena tsy mianatra i Kolombia . Na dia izany aza, nandritra ireo taona vitsy lasa izay, dia maro kokoa ny mpiray tanindrazana no mandeha any amin'ny tora-pasika mahafinaritra, fialam-boly lehibe ary mahafantatra ny toerana misy azy .
Ny tora-pasik'i Kolombia dia voalohany amin'ny toerana rehetra hialana amin'ny fialan-tsasatra tanteraka, ny fifankatiavana amin'ny tena sy ny tontolo iainana. Amin'ny ankapobeny, misy tetezana maherin'ny 300 no misy ao amin'ny firenena, izay ahitana ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasa sy ny fialam-boly isan-karazany, ary koa ny toerana ara-jeografika, ny lalana mankany Pasifika sy Karaiba.
Toerana fitorevahana lehibe any Kolombia
Ao amin'ny faritanin'ny firenena dia misy faritra efatra ho an'ny fizahan-tany an-dranomasina:
Cartagena . Ity no torolàlana malaza indrindra ao Kolombia ho an'ireo mpankafy hipetrahan'ny masoandro. Ny tanàna dia manasa ny hitsidika ny tora-pasika mahafinaritra, fa koa ny kolontsaina sy ny toetrandro, anisan'izany ny tsangambato fahatsiarovana ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany. Ny toeram-ponenana dia afaka manangona mpizahatany 1 tapitrisa. Natao ho an'ny vahiny izay te-haka an-tsitrapo amim-pahavitrihana ary hifalifaly amin'ny kliobana sy casinos. Ny tora-pasika lehibe sy lava ao El Laguita Cartagena any Kolombia dia manakaiky ny trano fandraisam-bahiny , fivarotana sy trano fisakafoanana.
Santa Marta . Fialantsasatra lamaody any amin'ny tanibe Kolombia. Fantatra tamin'ny alàlan'ny tora-pasika fotsy fotsy El Rodadero, izay manome fialamboly lehibe, fako, club, fivarotana sy trano fisakafoanana. Maro ireo trano fandraisam-bahiny sy trano lavareny eto. Any amoron-dranomasin'i Pozos Colorados, miorina eo afovoan-tanàna, dia mangina tsara, afaka mijanona ao anaty seclusion, miala sasatra any amin'ny faritry ny hotely eo an-toerana.
Ny nosy San Andres sy Providencia. Ny moron-dranomasin'ireny toeram-ponenana ireny dia misy karazana moron-dranomasina marobe, fotsy fotsy farafahakeliny eny amoron-tsiraka, vatoharan-dranomasina mahavariana miaro ny faritra amoron-dranomasina amin'ny onja mahery. Ankoatra ny fialam-boly fialan-tsasatra, afaka manao fialamboly sy snorkeling ianao, ary koa fanatanjahan-tena.
Buenaventura . Matetika isika no mahita izany eo amin'ny sarin'ny tora-pasik'i Colombia, ary misy fanazavana momba izany. Ny toeram-ponenana dia manavaka ny fisian'ny ala honko sy ny zavamaniry tropikaly. Mijery ny habakabaky ny Oseana Pasifika ny moron-dranomasiny. Ny fasika eto dia maizina kokoa sy lehibe kokoa noho ny any amin'ny morontsirak'i Karaiba ao Kolombia, ary ny ambany dia rocky kokoa. Ity toeram-pialan-tsasatra Pasifika ity dia azo ambolena manokana ho mpirahalavina, satria matetika no mamely rivotra mahery ny ao Buenaventura.
Tayrona Park . Niorina mihoatra ny 50 taona lasa izay, ny valan-javaboary dia mbola iray amin'ireo toerana milamina indrindra eto amin'ny firenena. Ireo mpizahatri-bidy izay tia ny irery, afaka manoro hevitra ny moron-dranomasina El Cabo. Mizara roa izy io, izay misy vato samihafa. Any amoron-dranomasin'i Arequife, afaka mandeha an-tongotra ianao amin'ny ala (manodidina ny 40-50 minitra). Misy rivo mahery sy rano mafana kokoa.
Ny nosin'i Rosario. Misy tahiry eo amin'izy ireo, izay ahitana tora-pasika maromaro. Mba hisorohana ny vatohara ao an-toerana eto amin'ity toerana ity dia avela fotsiny ny milomano.
Ny nosy Corals Andres Island. Fotoana vitsy miala amin'ny tanibe Kolombia izy ireo. Any am-piandohana no amidy sy amidy ny tora-pasika, lavitra ny toerana lavitra.
Amin'ny firy no tsara kokoa ny mandeha any Sunbathe any Kolombia?
Ny rivotra manerana ny firenena dia mitovy ny azy ary tsy miankina amin'ny toerana misy ny faritra. Mafana ny andro manerana ny tanindrazan'ny firenena, ny haavonavaratra mandritra ny andro amin'ny andro dia mahatratra 30 ° C. Ny rano any amin'ny Ranomasina Karaiba mandritra ny vanin-taona mafana dia mampitombo hatramin'ny 28 ° C, mandritra ny ririnina dia mihamafana hatramin'ny +20 ° C.
Raha ampitahao amin'ny morontsirak'i Karaiba sy ny morontsirak'i Pasifika, dia kely kokoa hatrany ny voalohany. Ohatra, amin'ny haavon'ny vanin-taona amin'ny moron-dranomasin'ny morontsirak'i Pasifika, ny mari-pana amin'ny rano matetika dia tsy mitsangana mihoatra ny 24 ° C. Ankoatr'izay, ilaina ny manisy fiheverana ny fisian'ny rivo-mahery any amin'ny morontsiraka any amin'ny Oseana Pasifika.
Ny fotoana mety indrindra amin'ny fitsidihana ny toeram-ponenana ao Kolombia dia ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa. Ny halaviran-tsokosoko amin'ireo volana ireo dia mihena be matetika, ary ny haavon'ny rano sy ny rivotra dia mitovy ary mitokona eo amin'ny 27 ° C.
Ny lovantsofin'i Però
Toerana Erantany Maneran-tany any Arzantina
Zava-baovao mahaliana momba an'i Chile
Peroa - fanofana fiara
Fitaterana an'i Bolivia
Zava-baovao mahaliana momba an'i Paragoay
Orogoay - Fitaterana
Fialantsasatra any Colombia
Toerana mahaliana ao Però
Toerana fitetezana ski any Arzantina
Volkano any Kolombia
Vaksiny ho an'ny kolontsaina
Monuments of Colombia
Ahoana ny fijerena vehivavy vehivavy?
Mipetraha eo amin'ny gorodona miaraka amin'ny tapa-kazo amin'ny hip
25 ankizy izay nanova ny tantara
Kansera sy Virgo - fifandraisana amin'ny fitiavana fifandraisana
Orinasa eo amin'ny tendany
Efitra amina trano maoderina - fanaka
Ahoana no hamaliana ny fanompana?
Ny saripikan'i Irina Sheik sy Bradley Cooper zanaka voalohany dia niseho tao amin'ny tambajotra
Inona no fiompiana rano kokoa tsara kokoa?
Hazo sarobidy ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hamolavolana ny minisitera avy amin'ny plastika?
Afangaro amin'ny hatsiaka
Kitapo amin'ny seza
Ny mpaka sary Gaspard Ulliel izay tsy ho ela dia ho lasa ray
Virgo Virgo, Virjiny vavy - Fifandraisana
Idris Elba dia manambady Sabrina Doure
Voninkazo eny amoron-dranomasina